आत्मा के हो ? यस्तो भन्नुहुन्छ भगवान श्रीकृष्ण – Suchana Hub
आत्मा के हो ? यस्तो भन्नुहुन्छ भगवान श्रीकृष्ण
काठमाण्डौ । मद्भागवत गीताहिन्दू धर्मका पवित्रतम ग्रन्थहरूमा एक हो । भगवद्गीतामा आत्मा शब्दको निकै वर्णन गरिएको छ । आत्मा अपरिमित छ , सर्वत्र व्याप्त छ ,सर्वोच्च छ र अशिम आनन्दले भरिपूर्ण छ । भगवद्गीतामा आत्मा शब्दको कहीँ जीवात्मा, कहीँ परमात्मा, कहीँ अन्तःकरण,कहीँ मन, कहीँ चित्त, कहीँ ईन्द्रिय र कहीँ स्वयम् आफैँलाई बुझाउने शब्दको रुपमा प्रयोग भएको छ ।
नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक: । न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत : ।। आत्मालाई न कहिल्यै कुनै हतियारले टुक्र्याउन सकिन्छ न त आगोले डढाउन नै सकिन्छ, न पानीले भि* जाउन सकिन्छ न त हावाद्वारा नै सुकाउन सकिन्छ। यो व्यस्टी आत्मा कहिल्यै पनि नफुट्ने, नडढ्ने , नभिज्ने तथा नसुक्ने किसिमको हुन्छ। यी आत्मा सधैं रहिरहन्छ, सर्वव्यापक छ, अपरिवर्तनशील छ, अचल छ र सर्वदा एकैनासको रहन्छ। आत्मा अन्तर्हृदयको दिव्यज्योति हो र परव्रह्मकै स्वरुप पनि हो । भिडियो हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । subscribe मा क्लिक गरेपछि सँधै भिडियो हेर्न पाईनेछ ।
श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ–आत्मा दिव्यज्योति स्वरुप छ र यो मानिसको अन्तरात्मामा विराजमान छ । आत्मा अजर ,अमर र अनश्वर छ । यो आत्मालाई अव्यक्त , अचिन्त्य र अपरिवर्तनीय भनिन्छ। यो कुरा बुझेर पनि तिमीले शरीरका लागि शोक गर्नु हुँदैन । यदि तिमिले आत्मालाई सधैं जन्मिइरहने र सधैं मरिरहने ठान्छौ भने पनि हे महाबाहु! तिमीले यसका लागि शोक गर्नु पर्ने कुनै कारण नै छैन। जो जन्मिएको छ, ऊ एकदिन अवश्य नै मर्छ र मरेपछी फेरि अवश्री जन्मिन्छ, अत: आफ्नो नगरि नहुने कर्तव्यको पालन तिमीले गर्नैपर्दछ र यसमा तिमीले कहिल्यै पनि शोक गर्नुहुँदैन।
Previous आज इद पर्व, मस्जिद नगई घरमै बसेर नमाज पढ्न यस्तो अपिल
Next तितेपातीका यति धेरै फाइदाहरु, यसरी प्रयोग गर्नुहोस् :